Dhageyso:Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya oo ka hadlay arimo muhiim ah | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA / Dhageyso:Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya oo ka hadlay arimo muhiim ah
Posted by: DBN in WARARKA, WAREYSIYO February 28, 2018	Comments Off on Dhageyso:Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya oo ka hadlay arimo muhiim ah
Wasiirka wasaaradda howlaha guud, guryeynta iyo dib u dhiska Soomaaliya ENG Saadaq Cabdulaahi Cabdi oo wareysi gaar ah siiyey Radio Danan ayaa waxaa uu sheegay in wasaaradda uu wasiirka ka yahay ay ku guulaysatay arrimo dhowr ah oo ku saabsan dib u dhiska dalka, mashaariic farabadana ay ku howlan yihiin dar-dar galintooda.
Wasiir Saadaq Cabdulaahi Cabdi waxaa uu intaas warkiisa ku daray in lixdii bilood ee uu xilka wasaaradan uu hayo uu qabtay arimo laxariira mashaariic farabadan oo ku saabsan maamulada ka jira dalka iyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Waxaa uu sharaxay Booqashadii uu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose oo uu sheegay in ay ka mid ahayd mashaariic uu ka helay Hay’adaha dalka Turkiga iyo mataanaynta magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose iyo magaalo ka mmid ah dalka Turkiga.
Waxaa uu intaas raaciyey in horay uu u tagay magaalada Baydhabo, haatana uu qorshaynayo in uu booqdo si uu u soo qiimeeyo gobolada maamulada Hir-Shabeele, Puntaland iyo Galmudug.
Waxaa uu yiri”waxaan sameeyey markii aan lawareegay xilka wasaaradda in aan raadiyo shaqsiyaadka ka bixi kara arimaha dib u dhiska dalka iyo aqoon yahano howshaas ku wanaagsan.
waxaa ii suura gashay in aan helo qaarkood, wayna socdaan howlaha dib u dhiska dalka, waxaa intaas dheer arimaha ay wado wasaarada Qorshaynta oo aan isla qaabayneyno iyo kuwo kale.
Kismaayo waxay ka mid ahayd qiimeynta dib u dhiska iyo mataaneynta maadaama magaaladaas dalka Turkiga ku taalo iyo kismaayo ay aad iskuugu egyihiin xagga dhismaha.
Waxaan qorshaynayaa in aan soo qiimeyo Puntland, Galmudug iyo Hir-shabeele waxaan horay u tagay Baydhabo howlaha meel wanaagsan ayey noo maraan ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyey.”
Wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliya ENG Saadaq Cabdulaahi cabdi ayaa waxaa uu ka mid ahaa aqoon yahanada Soomaaliyeed ee ka shaqeynayey mid ka mid ah Hay’adaha dalka Turkiga ka hor inta aan loo magacaabin wasaaradan.
Dadka sida Aadka ah u yaqaana ENG Saadaq Cabdulahai Cabdi ayaa waxay ku sheegaan in uu yahay shaqsi ku wanaagsan wasaaradan dib u dhiska dalkana uu kaalin weyn ka qaadanayo.
Previous: Suuq madoow oo carruurta lagu iibiya miyaa ka jira Somaliland?
Next: Faah Faahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay Duleedka Muqdisho